Dowladaha Maraykanka iyo Kenya ayaa ka hadlay sida loo yareyn karo dilalka wariyaasha Soomaaliya – idalenews.com
Dowladaha Maraykanka iyo Kenya ayaa ka hadlay sida loo yareyn karo dilalka wariyaasha Soomaaliya
Xukuumada Washitong ayaa ka dalbaday dowlada Soomaaliya inay wax ka qabato dilalka qorsheysan ee loo geysanayo Wariyaasha iyagu u bareeray inay ku shaqeeyaan dal aan xasilooni ka jirin.
Ku-xigeenka kaaliyaha xoghayaha arrimaha dadweynaha ee dalka Mareykanka Tara D. Sonenshine oo xuska maalinta madax-bannaanida warbaahinta dunida ee 3-da May shir jaraa’id ka qabatay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in xog dhab ah laga ogaado dadka ka danbeeya Laaynta wariyaasha Soomaaliyeed,islamarkaana gacanta lagu soo dhigo si cadaalada loo horkeeno.
Sonenshine ayaa sheegtay in dowladda Mareykanka ay si weyn uga xun tahay dilalka joogtada ah ee loo geysto wariyeyaasha Soomaaliyeed, waxayna tilmaamtay in wax laga xumaado ay tahay in wariyaasha Soomaaliyeed oo xaalad adag ku shaqeynayo la bar-tilmaameedsado.
Tara D. Sonenshine oo shirkeeda Jiraa’id si weyn ugu hadashay dhibaatooyinka soo gaara waiyaasha gaar ahaan kuwa Soomaaliya ka howlgala,ayaa dhanka kale waxay xustay in dowlada Soomaaliya ay la timaado Xisaabtan dhab ah oo ku aadan dadka dhibaateeya wariyaasha si taasi ay u horseedo yareynta dilalka saxafiyiinta af maalka ah.
Dhanka kale Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya Uhuru Kenyati oo shir jiraa’id u qabtay saxafiyiin wadamo kala duwan ka socda,ayaa xusay inuu ka qaadayo talaabo waliba oo ka hortageyso Xuriyatul qowlka saxaafada,isagoona si gaar ah u tilmaamay in Xukuumada Soomaaliya uu ka gacan siin doono la xisaabtanka Kooxaha hubeysan ee u xuub siibtay dilalka wariyaasha Soomaaliya.
Uhuru Kenya oo ku dheeraaday ahmiyada saxafiga ayaa sheegay in gudbiyaha wararka xaqiiqda ah bulshada uu kaalin Mug ah kaga jiro dhibaatadiisana bulshada ka damqaneyso.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay ka mid tahay Meelaha ugu qatarta Badan ee saxafiyiinti ay ka howlgalaan.
Xuska maalinta madax-bannaanida warbaahinta dunida ee 3-da May ayaa ku soo aaday xilli dilalka saxafiyiinta ay ku badan tahay Soomaaliya, iyadoo sanadkii hore la dilay 18 wariye halka sanadkaan tirada wariyaasha la dilay ay mareyso afar wariye.
(DAAWO SAWIRADDA) Askari ka tirsan Maamulka Somaliland oo madaxa iska toogtay